Socodka adduunka ee nabadda iyo rabshadaha - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Noticias » Qoraalada saxaafadda » Socodka adduunka ee nabadda iyo rabshadaha
Socodkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay ee "Senderistas del Mundo por la paz y la nonviolencia"
Bishii Juun 27, 2021, socodkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay ee "World Trekkers for Peace and Nonviolence" ayaa la qabtay.
Kooxdan aasaaseed ee ugu horeysay ee Senderistas ee nabadda iyo rabshadaha, waxaa aasaasay badanaa dhalinyaro ka timid magaalo la yiraahdo San Marcos de Tarrazú, iyo deriska ka soo jeeda aagga quduusiinta, sida gobolkan loo yaqaan, oo ka tirsan Gobolka San José ee Costa Rica. Iyada oo lala kaashanayo iyo hagaha xirfadeed ee arrimaha buurta Santi Montoya.
Marka loo eego tilmaamaheeda, ujeedada laga leeyahay talaabadan cusub ee wax qabad ee ururka aadanaha, World without Wars iyo rabshad la’aan, waa; Ku dhiirrigelinta abuurista miyir-beel caalami ah oo aan rabshad lahayn iyada oo loo marayo socodka.
Iyadoo loo marayo horumarinta nashaadaadyada tamashlaha madaddaalada, koox ahaan, hab nabadgelyo iyo hagitaan,
Halkaas ka sokow helitaanka faa'iidooyinka waxqabadka la sheegay, shaqo ayaa loo qabtaa loogu talagalay
raadinta wada noolaanshaha iyo shaqsi ahaaneed, bulsho, horumarka bulshada, iyo waliba dabeecadda, baabi'inta dhammaan noocyada rabshadaha jira.
Waqtiyadan adag ee firfircoonida, fikraddaan abaabulka ee dhanka buuraha ayaa la keenay, taas oo la filayo inay noqoto ikhtiyaar waxqabad dhammaan waddamada 33 ee Dunida Dagaal la'aan iyo rabshad la'aan ay ka hawlgasho, taasina waxay u adeegi doontaa farsamo bulshada muujinta, iyo sidoo kale xaqiijinta dhaqamada iska kaashanaya horumarka koritaanka iyo xoojinta gudaha ee bini'aadamka isla mar ahaantaana, sidoo kale waxay u adeegtaa horumarinta mashaariicda maxalliga ah ee isbeddelka bulshada, daryeelka deegaanka iyo isdhaafsiga shabakadaha midnimada iyo aadanaha , beelaha ay ka hawl gasho.
Kooxo safar ah oo abaabulan ayaa sidoo kale la filayaa inay ku biiraan kana qaybgalaan iyagoo u socdaalaya buurahooda inta lagu guda jiro Maarso Latin Ameerika ah ee loogu talagalay Xadgudubka, kaas oo dhici doona laga bilaabo Sebtember 15 ilaa Oktoobar 2.
Senderistas del Mundo oo ah nabad iyo rabshad la'aan.
Waxay waxqabadyadooda ka bilaabaan Costa Rica, iyagoo ah Jabhad Cusub oo Caalami ah oo Dunida Dagaal la'aan iyo rabshad la'aan.
Xaqiijinta Khibrada Nabadeed ee wadnaha buurta Cerro Frío ee Costa Rica.
Categories Qoraalada saxaafadda Tigidhka tigidhka
1 faallo ku saabsan «Senderistas del Mundo ee nabadda iyo rabshadaha»
Pingback: Soo bandhigid socodkii ugu horreeyay ee Latin America ee loogu talagalay rabshadaha iyo dhaqamada kala duwan ee aan rabshad lahayn - SurcosSurcos
Tomato comentario un Jooji jawaabta
magaca mail elektarooniga ah Web